FAAHFAAHIN KU SAABSAN CEEBTII UU SUUBIYEY WASIIRKII DABARE | Anti-Tribalism
← Banaanbixii looga soo horjeeday Mahiga iyo Dastuurka cusub oo la baajiyey kadib
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaaraha dowlada KMG oo Jabiyey heshiiskii Kampala →
FAAHFAAHIN KU SAABSAN CEEBTII UU SUUBIYEY WASIIRKII DABARE
Muqdisho (Moment Media Group ) Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha DKMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kuna taariikheysan 28-03-2012 ayaa lagu sheegay in xilkii uu hayey laga qaaday raysul wasaare ku xigeenka xukuumadda KMG Soomaaliya ahna Wasiirkii Wasaaradda Beeraha Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim oo ka soo jeeda DABARE- DIGIL IYO MIRIFLE.
Wareegtada madaxweynaha ayaa u qoryneyd sidatan;
Wareegto Lambar 086 kuna taariikheysneyd 28/03/2012
Ujedddo: Xil Ka Qaadis Wasiir
Markuu arkay:- Qodobka 44aad, xubintiisa 3aad ee Axdiga kumeel gaarka ah.
Markuu tixgeliyey:- Soo jeedintii Ra’isulwasaaraha, Sumad XRW/412/03/2012 kuna taariikheysan 20ka Maarso 2012ka oo ku
saabsan xil gudasho la’aanta Wasiirka Wasaaradda Beeraha,Xannaanada Xoolaha,Dhirta iyo Daaqa
Haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa xil ka qaadista wasiirka?
Ilo wareedyo ku dhow xafiiska raysul wasaare C/weli Gaas ayaa u xaqiijiyey Shabakada Raxanreeb in ay jireen eedeymo wasiirka ka dhan ah oo loo gudibyey xafiiska raysul wasaaraha iyo kan madaxweynaha kuwaasoo oo bannaanka soo dhigay fadeexado musuqmaasuq oo uu wasiirku dhex dabaashay intii uu kusimaha raysul wasaaraha ahaa mudo dhowr toddobaad ah oo
raysul wasaare Gaas ku maqnaa shirkii London ee dhacay 23-kii Febraayo.
Arimaha waaweyn ee wasiirka lagu heley waxaa ka mid ah in uu soo saaray saddex warqadood oo iska soo horjeeda oo uu kaga hadlay arinta maamulka Khaatumo State kuwaasoo labo jeer uu ku taageeray jiritaanka Khaatumo marna uu ku diiday wasiirku. Ilo wareedyada ayaa ku doodaya in baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in wasiirku uu lacago ka qaatay dad ka horjeeda Khaatumo State oo aan la sheegin.
Halka ka akhri qoraal uu wasiirku aqoonsiga kaga qaaday Khaatumo State 05-03-2012
Akhri qoraalkii uu markale wasiirku kaga laabtay aqoonsiga uu ka qaaday Khaatumo 10-03-2012
Sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in raysul wasaare Gaas uu ka carooday sida fudud ee kusimihiisa u maareeyey masuuliyada xafiiska mudadii uu ka maqnaa dalka iyo in dukumintiyadii xafiiska raysul wasaaraha si fudud loogu arkay suuqyada iyo warbaahinta.
Waxaan isku daynay inaan la hadalno Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim oo ah wasiirka shaqada laga ceyriyey hase yeeshee telefoonkiisa waa uu xirnaa.
Maxamed oo ka mid ahaa qurbejoogta reer London wuxuu hore u ahaa wasiirkii arimaha dibadda ee xukuumadda C/weli Gaas oo markii ugu horeysay la magacaabay bishii July 2011 hase yeeshee waxaa xilkaasi laga qaaday dhowr bilood ka dib isagoo loo dhiibay wasaaradda beeraha iyo raysul wasaare ku xigeenka oo ah meesha hadda laga ceyriyey.
Dhacdooyin kale, Dad u dhuunduleela wasiirada xukuumada Soomaaliya ayaa sheegaya in Maxamed kaliya uusan ahayn ragga xilka wasiirnimo ka haya dawlada ee ku dhaqma dhaqamada hadda lagu eedeeyey wasiirka.
Tusaale ahaan Shabakada Moment Media Group waxaa loo xaqiijiyey dhacdooyin ay aad uga cawdeen hay’adaha samafalka ee u badan kuwa Turkiga oo marka ay damcaan inay mashaariic fuliyaan la weydiisto lacago gacanmaris ah oo ay rabaan xubno xilal wasiirnimo ama wasiir ku xigeen ka haya xukuumadda.
Arimaha yaabka leh waxaa ka mid ah in ay jiraan rag wasiiro ah oo hadda sameystay NGO-yo maxalli ah ama qaar ay xiriir
dhow la leeyihiin kula heshiiyeen inay saami ka qaataan marka NGO-gaasi loo fududeeyo qaadashada mashaariicda samafalka ee dalka laga wado.
Arimahan iyo kuwo kaleba ayaa madax xannuun ku noqday raysul wasaaraha, Wasiirkaan ayaa CEEBEEYEY magaca Iyo sharafta DIGIL IYO MIRIFLE.